चिन्ताबारे बाइबलको दृष्टिकोण
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ (युनानिज) चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुगान्डा लुभेल शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
चिन्ताको दुइटा पक्ष हुन्छ। चिन्ता लिनु कहिलेकाहीं लाभदायी हुन्छ भने कहिलेकाहीं हानिकारक। बाइबलले हामीलाई यी दुवै पक्षबारे बताएको छ।
के चिन्ता लिनु ठीक हो?
चिन्ता लिंदा हामीलाई के गरौं, कसो गरौं हुन्छ। अनि हामी आत्तिन थाल्छौं। हामी अस्थिर संसारमा बाँचिरहेकोले जो कोहीलाई पनि चिन्ताले खान सक्छ।
राजा दाऊदले यसरी लेखे, “दिनभरि मेरो हृदयमा शोक बोकिरहेर कहिलेसम्म म मेरो आत्मामा चिन्ता लिइरहूँ?” (भजन १३:२) चिन्ताको सामना गर्न दाऊदलाई कुन कुराले मदत गऱ्यो? परमेश्वरले करुणा देखाउनुहुनेछ भन्ने कुरामा पूरा भरोसा गरेर तिनले प्रार्थना गरे। (भजन १३:५; ६२:८) पहिलो पत्रुस ५:७ मा परमेश्वर हामीलाई चिन्ताको भारी बिसाउन यसरी आग्रह गर्नुहुन्छ, “तिमीहरूले आफ्नो सारा फिक्री उहाँमाथि बिसाओ, किनकि उहाँले तिमीहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ।”
माया गरेको व्यक्तिको लागि केही गरिदिंदा तिनीहरूप्रतिको हाम्रो चिन्ता कम हुन सक्छ
हामी विभिन्न तरिकामा चिन्ता कम गर्न सक्छौं। उदाहरणको लागि, बाइबलका लेखक पावललाई “सबै मण्डलीको चिन्ताले” सताउँदा तिनले के गरे? ज-जसको चिन्ता लागेको थियो, तिनीहरूलाई सान्त्वना अनि प्रोत्साहन दिन निकै मेहनत गरे। (२ कोरिन्थी ११:२८) पावलले यसरी चिन्ता गर्दा लाभदायी साबित भयो। किनभने तिनले अरूलाई आवश्यक मदत दिन सके। हाम्रो सन्दर्भमा पनि यस्तै भन्न सकिन्छ। चिन्ताको ठीक विपरीत अर्थात्‌ भावशून्य मनोवृत्ति राख्यौं भने अरूप्रति मायालु चासो देखाइरहेका हुँदैनौं।—हितोपदेश १७:१७.
“तिमीहरू आफ्नै कुरामा मात्र होइन तर अरूको कुरामा पनि ध्यान देओ।”—फिलिप्पी २:४.
अनावश्यक चिन्ता कसरी कम गर्ने?
मानिसहरू आफूले विगतमा गरेको गल्ती, भविष्य वा पैसाको विषयलाई लिएर चिन्ता गर्छन्‌। *
आफूले विगतमा गरेको गल्तीबारे चिन्ता: प्रथम शताब्दीका कोही-कोही व्यक्ति ख्रीष्टियन हुनुअघि पियक्कड, लुटाहा, चोर अनि अवैध यौनसम्बन्ध राख्नेहरू थिए। (१ कोरिन्थी ६:९-११) तिनीहरूले विगतबारे मात्रै सोचिरहनुको सट्टा आफ्नो आनीबानी परिवर्तन गरे अनि परमेश्वरले दया गर्नुहुन्छ भनेर उहाँमा भरोसा गरे। भजन १३०:४ यसो भन्छ, “तपाईंसित क्षमा पनि छ।” यसको अर्थ परमेश्वरले क्षमा दिन सक्नुहुन्छ।
भोलि के होला भन्ने चिन्ता: “भोलिको चिन्ता कहिल्यै नगर किनभने भोलिको चिन्ता भोलिले नै गर्नेछ” भनी येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। (मत्ती ६:२५, ३४) यसको अर्थ के हो? उहाँले आजको समस्याबारे मात्रै चिन्ता गर्नू भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। भोलिको चिन्ता गर्दा आजको चिन्ता झन्‌ बढ्‌छ। साथै हाम्रो निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर हुन सक्छ र गलत निर्णय गर्न पुग्छौं। नबिर्सनुहोस्, हामीले लिने कतिपय चिन्ता त वास्तवमा लिनै नपर्ने हुन्छ।
पैसाको चिन्ता: एक जना बुद्धिमान्‌ मानिसले एक पटक यसरी प्रार्थना गरे, “मलाई नता दरिद्र बनाउनुहोस्, न मलाई धन दिनुहोस्।” (हितोपदेश ३०:८) तिनी थोरै कुरामा सन्तुष्ट हुन चाहन्थे। परमेश्वर यस्तै व्यक्तिलाई मन पराउनुहुन्छ। हिब्रू १३:५ मा यस्तो लेखिएको छ, “तिमीहरूको जीवनशैली पैसाको प्रेमबाट मुक्त होस्, बरु अहिले आफूसित भएका कुराहरूमा सन्तुष्ट होओ। किनकि उहाँले यसो भन्नुभएको छ: ‘म तिमीलाई कुनै हालतमा छोड्‌नेछैन, न त कहिल्यै त्याग्ने नै छु।’” पैसाले सधैं साथ दिन सक्दैन तर परमेश्वरमा भरोसा गर्ने अनि सरल जीवन बिताउनेहरूलाई उहाँ सधैं साथ दिनुहुन्छ।
“धर्मात्मा त्यागिएको, र तिनका सन्तानले भिक्षा मागेको मैले देखेको छैनँ।”—भजन ३७:२५.
के हामी कहिल्यै चिन्ताबाट मुक्त हुन सक्छौं?
मानिसहरू के भन्छन्‌?
सन्‌ २००८ मा प्रकाशित द गार्डियन भन्ने अखबारमा पत्रकार हेरिएट ग्रीनले यसरी लेखे, “हामी चिन्ताले भरिएको युगमा प्रवेश गर्दै छौं।” सन्‌ २०१४ मा प्याट्रिक ओकनरले एउटा अमेरिकी अखबारमा यसरी लेखे, “अमेरिकीहरू अहिले जति पहिला कहिल्यै चिन्तित थिएनन्‌।”
“चिन्तित हृदयले मानिसलाई अशान्ति ल्याउँछ, तर दयालु वचनले त्यसलाई आनन्द दिन्छ।” (हितोपदेश १२:२५) पक्कै पनि दयालु वचन “परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार”-मा पाइन्छ। (मत्ती २४:१४) यो राज्य परमेश्वरको सरकार हो। यसले हामीले कहिल्यै गर्न नसक्ने कुरा अब चाँडै गर्नेछ। जस्तै: चिन्तालाई जरैसमेत उखेल्नेछ, रोग निको पार्नेछ अनि मृत्युलाई हटाउनेछ। “[परमेश्वरले] तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ अनि मृत्यु हुनेछैन, न त फेरि कहिल्यै शोक, रुवाइ वा पीडा नै हुनेछ।”—प्रकाश २१:४. (g16-E No. 2)
“आशा दिनुहुने परमेश्वरले, तिमीहरूले गरेको विश्वासको आधारमा तिमीहरूलाई सारा खुसी र शान्तिले भरिदिऊन्‌।”—रोमी १५:१३
^ अनु. 10 चिन्ताले सताउने गम्भीर रोग लागेको छ भने डाक्टरसित परामर्श लिनु बेस हुन्छ। ब्यूँझनुहोस्! पत्रिकाले कुनै खास किसिमको थेरापी वा उपचार सिफारिस गर्दैन।
पुरुषहरूले गर्ने चिन्ताफिक्री​​—⁠बाइबलले कसरी मदत गर्न सक्छ?
यो असाध्यै कठिन समयमा चिन्ताफिक्री भनेको बढ्‌दै गइरहेको एउटा समस्या हो। यदि तपाईँ पनि चिन्ताफिक्रीको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने के बाइबलले तपाईँलाई मदत गर्न सक्छ?
तपाईँ कसरी चिन्ता-फिक्रीको सामना गर्न सक्नुहुन्छ?
असाध्यै तनाव भएको बेला बाइबलले त्यसको सामना गर्न मदत गर्छ।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने चिन्ता